IMaths Loft - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMarios & Christina
Igumbi lokufundela eliguquliweyo leMathematika elibekwe kwindlela enkulu esuka ePaphos ukuya eCoral Bay. Amanqanaba ama-2 e-loft yethu iza nobuntu obukhulu kunye noyilo olukrelekrele. I-loft ivula iimbono zolwandle ukusuka kuzo zombini imigangatho eyi-80 sq. meter. Iindwendwe zineelwandle ezi-5 ezahlukeneyo zokukhetha ukusuka kufutshane kakhulu/umgama wokuhamba kunye nendlela ethandekayo yabahambi ngeenyawo esecaleni lolwandle. I-Maths loft ilungele izibini, iintsapho ezincinci kunye noyilo olunomdla. Ibonakaliswe kwiibhlog zoyilo ezifana neDezeen & Dwell phakathi kwabanye.
Ibanzi, eqaqambileyo kwaye yahlulwe ngamanqanaba amabini. Igumbi lokulala, igumbi lokuphumla kunye neWC zikumgangatho osezantsi ngelixa inqanaba eliphezulu ligcina ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elinye (neshawa). Izithethi ze-Wi-Fi ziyafumaneka ukuze uqhagamshelane neselula okanye ilaptop yakho.
Iintsuku eziyi-7 e Paphos
Kumgama wokuhamba ukusuka kwindawo yethu ephezulu uya kufumana indlela yabahambi ngeenyawo esanda kwakhiwa edlula kwiindawo ezimbini ezithandekayo zokuqubha. Unokunyuka le ndlela kwaye ufumane iindawo zakho eziyimfihlo ukonwabela impepho yolwandle, izandi zendalo kunye nevumba kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo konxweme lwasentshona.
Indawo yethu ibaluleke kakhulu kwi-Archaeological. IKissonerga Mosfilia, indawo ebaluleke kakhulu ngokwembali ekufutshane ibonisa enye yezona ndawo zindala zeNeolithic eSipro. Imithombo yamanzi efunyenwe ngabembi bezinto zakudala kwindawo yethu ikholelwa ukuba iphakathi kweyona midala emhlabeni, ineminyaka engama-9,000 ukuya kwi-10,500 ubudala.
"Inguqulelo yangoku" yendawo yethu ibandakanya iivenkile ezimbini zekofu kumgama oziimitha ezimbalwa zokuhamba, abalungisi beenwele, iindawo zokutyela, iimarike ezincinci, iATM, ivenkile yekhompyuter, ivenkile yezikhumbuzo, irenti yemoto, imivalo yaselwandle kunye namasimi ebhanana macala onke.
Ngokufutshane uqhuba unokufikelela kwiilali ezikhethekileyo zemveli ezifana neKathikas, iArodes, iAkourdaleia, iMiliou kunye nosingasiqithi weAkamas, ipromontory kunye nekapa kunye neentlobo ngeentlobo zobomi ezibandakanya uninzi lweentlobo ezisesichengeni, ezinye zazo ezihlala kwiAkamas. ELara Bay (i-turtle beach) kukho i-turtle hatchery, apho amaqanda akhuselwe khona.
Iloft yethu iphakathi kweendawo ezi-5 ezintle zolwandle zonke zingaphantsi kwe-1.2 km
- Ulwandle lwaseMouttes (Nqo ezantsi kwendlela, ecaleni kweCynthiana Hotel) ilungile kwiSnorkelling + ichibi lamatye lendalo. Malunga ne-500m umgama wokuhamba.
- iPente Litharka, ulwandle oluncinci olunesanti (Ezantsi kweQueens Bay Hotel ngasekunene) malunga ne-500m umgama wokuhamba.
Ekuseni mhlawumbi uya kuzifumana uwedwa.
- Ulwandle lweSandy (lulungele ukuSurfing, iBodyboarding, iSup) 1.2 km ngasekhohlo.
Kukho ibha yaselwandle, mva nje yindawo ephithizelayo, abantu beza
kulo lonke elaseSipro.
-Potima Beach 1.2 km (kunye nebar enkulu yolwandle)
- Ulwandle oluNcinci ngaphantsi kweVardas yokutyela kwi-600m ngasekhohlo.
Umbuki zindwendwe ngu- Marios & Christina
Sihlala sikufutshane kwaye siyakuvuyela ukukunceda ngayo nantoni na onokuyidinga.
UMarios & Christina yi-Superhost